२० वर्षपछि ‘भोटे मेला’
वाह ! जिन्दगी
फाल्गुन १५, २०७६
२० वर्षअघिसम्म भोटबाट घोडालाई नुन बोकाएर ल्याई तराईमा बेच्ने ‘भोटे’हरु दाङको तुलसीपुरस्थित पर्सेनीमा भेला भएर मेला भर्थे । नुन किन्न मानिसको भीड लाग्थ्यो । मेलामा घोडादौड हुन्थ्यो । धेरै दौडनसक्ने घोडा राम्रो मूल्यमा बिक्री हुन्थ्यो । जिल्लाभर भोटे मेला चर्चित थियो ।
सडक र सहरको विकाससँगै भोटेहरु दाङतिर झर्न छोडे । मेला पनि हरायो । तर, अहिले तीनै भोटेहरुको सम्झनामा शुक्रबार भोटेमेला मनाइएको छ । शिवरात्रिको अवसर पारेर तुलसीपुर–७ स्थित कालाखोलामा आयोजना गरिएको मेलामा स्थानीयको उल्लेख्य सहभागिता थियो ।
‘इतिहास सम्झने प्रयास स्वरूप मेला आयोजना गरिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए । आगामी वर्षमा पनि यस्तो मेलाको आयोजना गर्ने योजना भएको तुलसीपुर–७ का वडा अध्यक्ष टोपबहादुर केसीले बताए । २०५६ सालदेखि उक्त मेला आयोजना भएको थिएन ।
कोभिड–१९ को जोखिम मुल्यांकन गर्ने बिधि (कोभिरा) सार्वजनिक
गर्भवती वा सुत्केरीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिए के गर्ने ?
निर्मातासँग कलाकारको गुनासोः काम गराउने, अनि हराउने ?
राइडरलाई रोजीरोटीकै समस्या
जातव्यवस्थासँग जुध्ने नेता जोडी
वैशाख ८, २०७७
कोरोना संत्रासले बिस्केट जात्रा सुनसान
Copyright © Saptahik